Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "nyeredzi", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "nyeredzi", iro shamwari manzwiro?
Card of "nyeredzi" dziri 3500 Yen Free yokunyatsoongorora kuti nzira
nyanzvi kufembera ari neizvi nzvimbo "nyeredzi" ndiko, sezvinoita nyeredzi rinopenya murima usiku denga, tarisiro uye tariro, munguva yemberi iri pedyo zvinoratidza kuti ndashama inopenya ezvinhu. Nokuti vanhu kare zvinhu kwete chaizvo vasingagutsikani, Ungakwanisa kuva pedyo mberi tariro, kana vanhu vari kufara pamwe Nezvagara Zviripo, kana iwe kuputsa chinzvimbo kwakabva chakavhura ramangwana rakajeka kungadudzirwa.
parudo, unogona vajaire ukama advance rimwe danho kubva ukama naye ikoko. Kusvikira ipapo ave kudanana pamwe nemumwe aiva noukama pakati neshamwari, kana kuti chivimbiso chokuroorana uye anoda, akadai kusanzwisisa kunogona kugadziriswa, zvazova nokuyerera wematambudziko kuti zvichida kuitika zvingava pakati vanhu vaviri.
Chii chinorehwa zvakanaka nzvimbo nemamwe webato manzwiro
zvakanaka nzvimbo "nyeredzi" zvinofanirwa kureva "nyeredzi" ndiko, ramangwana rakajeka, kugutsikana, tariro, kubudirira, uye zvichingodaro. The ezvinhu aripo ndiko atendeuke, kana kuisa muruoko ramangwana rakajeka munguva yemberi iri pedyo, unoratidza zvinoita pokuziva tariro uye zviroto.
Kana vanhu vari kushamisika chii kureurura vasikana kuti kunetseka, kana wajaira nehasha manzwiro uye vanoedza kureurura, kana haana ini chete kuonekwa seshamwari isu tine okuda mangu, uyewo anoda kubva kushamwari kana kuva, hwakadaro muroorane kubva unoda, kana zvakatangira anotarisirwa kuzvimba zviitiko kune ramangwana, mwoyo nokuchinja zvichaitika.
kana kadhi iri panze, manzwiro ake tinotungamirirwa kwamuri. Naye imi chinowanzoitika zvakanaka kunyange kana nokureurura, tichapedza nguva yakanaka pasinei aiva naye. Pfungwa yacho iri kuti tikoshese maviri vanhu nguva. Kana
zvinopesana neizvi chinzvimbo "nyeredzi" zvinofanirwa kureva "Nyeredzi" akabuda ari neizvi nzvimbo , Current mamiriro ezvinhu, asi rinofanira kuva netariro nokuti mamiriro ezvinhu akanaka kwazvo nokuda kwangu, pane mukana kuti Li kuti havachavimbi chivimbo pachangu, zvakare kuverenga zvakawandisa kupinda zvinhu kuva asingadi.
anoda chinhu, asi kudanana kuti kana vasingagoni kumira vanhu vaviri hwemangwana sevasingazivi kongiri, kana ndikaenda nechivimbo kuramba hurumende iyi, kutambura mafungiro yakawandisa Arekore oga zvingava.
Kana kadhi iri vakabuda, iwe naye zvakakwana kufunga kuti hazvirevi kuti mafungiro iwe.
pasinei kunzwa tembiricha mbiri vanhu, vachava kugumbuka. Nokudhiraivha panguva chete chinangwa kunogona mamiriro ezvinhu umo ivo dziri, guru mugumo kubvuma chekubuda, guru riri kuedza kusiya muviri pamusoro mamiriro ezvinhu mumwoyo Sei. Pasina kugara pfungwa yakawandisa, ndingadai Zvakakosha chokwadi vanofunga kuti noushingi.